Seyiqashe umqeqeshi omusha iCape Town Spurs ngumuva kokulaxaza uHeric - Impempe
Seyiqashe umqeqeshi omusha iCape Town Spurs ngumuva kokulaxaza uHeric
Umqeqeshi omusha weCape Town Spurs, u-Ian Taylor nomsizi wakhe uNathan Paulse abanomsebenzi onzima wokutakula leli qembu
Sekungu-Ian Taylor ozoqeqesha iCape Town City esahleli ngasemsileni kwiGladAfrica Championship kulandela ukushaya ngonyawo lonwabu ekuqaleni kwesizini ingaphansi kukaVladislav Heric.
Lo makadebona waseSerbia ugcine ekhonjwe indlela ngenxa yokugqoza kwemiphumela, kanti endaweni yakhe sekuqashwe uTaylor ozosizwa nguNathan Paulse.
Emidlalweni engu-11, i-Urban Warriors isaqoqe amaphuzu ayishumi kuphela okuyenza ibe sendaweni yesibili ukusuka emuva.
Lokhu kuphikisana nezifiso zabaphathi beqembu abebefuna liqhubeke la ligcine khona ngesizini edlule. Laqeda endaweni yesibili ngemuva kweSwallows lisabizwa nge-Ajax Cape Town ngaphambi kokugqabuka kwegoda lobudlelwano ne-Ajax Amsterdam.
“Into okuyiyona ebalulekile njengamanje wukuhleleka kwendlela esidlala ngayo. Kumele silihlanganise kahle iqembu, lidlale ngokuzwana kodwa khona lapho sidinga nemiphumela ejabulisayo,” kusho uTaylor.
“Asizutatazela, sizobhekana nomdlalo ngamunye, ngeke sibheke izinto ezikude kunathi. Kumele sidlale ngendlela ehlelekile… sishaye amagoli, ngoba iyonanto eshodayo leyo,” kucacisa uTaylor.
Iphini lakhe, uPaulse, uthe usemningi umsebenzi obahlalele kanti naye unombono wokuthi kumele bangabheki eceleni, kodwa banake iqembu labo.
“Ngicabanga ukuthi mningi umsebenzi osihlalele, kodwa ngikholwa wukuthi sisenza kahle. Njengamanje akumele sibuke kude, kumele sizame ukubuyisela iqembu kule sizini,” kusho uPaulse.
Laba naqeqeshi bazoba nesikhathi esanele sokulungiselela iqembu labo njengoba umdlalo wabo olandelayo ungoMsombuluko. Bazoba besebhentshini okokuqala uma iSpurs sesigadulisana neBaroka kwiNedbank Cup ePolokwane.
Previous Previous post: Kuthe cosololo kuBenni eqeda inkani yeSele Sele
Next Next post: Ithwaliswe uthayela kunomoya eThekwini iPirates ishaywa yi-Arrows